NTFS, nke anọchi New Technology File System, bụ otu faịlụ usoro ahụ e mepụtara Microsoft na 1993. Ọ na-ada ebe nke abụba na elu arụmọrụ File System. NTFS nwere ọtụtụ oru ndozi gụnyere nkwado maka metadata, na elu data Ọdịdị. Lee ndị atụmatụ nke NTFS:
-NTFS Wee na mma arụmọrụ, pụrụ ịdabere, na mma disk ohere itinye n'ọrụ.
-Ọ Na ndị ọzọ na extensions dị ka faịlụ usoro journaling na nche ohere akara ndepụta.
-Ọ Gụnyere ọhụrụ atụmatụ dị ka sparse faịlụ nkwado, reparse ihe, disk ojiji quotas, kesara njikọ nsuso na encrypting File System.
A tụnyere n'etiti NTFS na abụba 16 / abụba 32 na exFAT
NTFS bụ pụtara ọhụrụ tụnyere abụba ma ọ bụ Ex abụba Otú ọ dị ka atọ nile-eji taa n'ihi na ha niile ha uru na mwepu. Ebe a anyị nwere tụnyere NTFS, FAT16 / FAT32 na exFAT-enyere gị aka ịghọta ihe dị iche n'etiti niile.
232 ụyọkọ mwepu 1 ụyọkọ
32 GB maka niile os. N'ihi na ụfọdụ OS 2TB
Max faịlụ na Mpịakọta
Fọrọ nke nta na-akparaghị ókè
Ee ma ntakiri ACL naanị
Ọ bụrụ na ndị olu bụ obere, ịrụ ọrụ bụ rụrụ arụ ma na-aga Anglịkan.
Dị nnọọ elu na obere mpịakọta na Anglịkan
Diski ohere aku na uba
Ee ma ọ bụrụ TFAT na-arụ ọrụ
Ndịrịta iche ndị a na-egosi otú ọ bụla siri ike mbanye ụdị nwere ha uru na mwepu. N'ihi ya, n'ihi na nzube kpọmkwem ike mbanye na kpọmkwem uru na-eji. Nke a bụ ihe ka niile iche-iche-eji.
Olee otú naghachi faịlụ site na NTFS faịlụ usoro
Ọ bụrụ na i furu efu gị faịlụ mmadụ na mberede, nwere ike ịbụ n'ihi nhichapụ, virus agha, formatting, na-ezighị ezi ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, e nwere ụzọ naghachi ị faịlụ. The ọzọ software si Wondershare akpọ Data Recovery bụ ngwá ọrụ dị ike inwe mgbe na mberede nke faịlụ atụfu. Nke a software bụ ike nke na-agbake ihe ọ bụla na dị nnọọ ole na ole nzọụkwụ. Ebe a na-Ọ na atụmatụ:
-Ọ Bụ ike naghachi niile ụdị nke faịlụ gụnyere akwụkwọ, videos, ozi, photos, audios, Archives na ọtụtụ ndị ọzọ.
-Ọ Nwere ike naputa site na ngwaọrụ dị ka egweri biini, ike mbanye, flash draịva, ebe nchekwa kaadị, mbughari draịva, igwefoto dijitalụ / camcorder wdg
-In Ọtụtụ ndị data ọnwụ ndapụta a software ga-arụ ọrụ ọ ga-abụ na mberede nhichapụ, formatting, na-ezighị ezi na ime ihe, kọmputa virus, okuku, fragmentation na ọtụtụ ndị ọzọ.
-Software Na-arụ ọrụ n'ezie ngwa ngwa na ike naghachi data na nkeji na mma. The interface bụ onwe-eduzi ha, na N'ihi ya, ọbụna ihe akwụkwọ ọnụahịa nwekwara ike iji nke a software na ala.
-Currently, Ọ na-akwado Windows na Mac kọmputa.
Ị nwere ike ibudata zuru version software ya ukara na saịtị na ma Windows na Mac na nsụgharị ndị dị. Otú ọ dị, ị chọrọ ị pụrụ ịgbalị free version na-enwechaghị atụmatụ. Lee ndị atọ iji naghachi data si NTFS ike mbanye iji Wondershare Data Recovery.
Download software si ukara saịtị nke wondershare. Wụnye ya na gị Windows ma ọ bụ Mac. Tupu ị ẹkedori software, jide n'aka na ị jikotara mbanye si nke ị chọrọ naghachi faịlụ. Ugbu a ẹkedori software na kọmputa gị, na-aga Echefuola File mgbake, na pịa ya.
On Next ihuenyo, ị ga-ahọrọ mbanye si nke ị chọrọ naghachi. Ọ ga-depụta niile draịva jikọọ kọmputa gị. Ị nwekwara ike ịhọrọ otú ị chọrọ iṅomi mbanye. Ị chọrọ a nke ọma iṅomi ma ọ bụ ngwa ngwa iṅomi. Ugbu a dị nnọọ pịa na mbanye na ị chọrọ iṅomi. Ọzọ click on Malite na-amalite iṅomi.
Otu ugboro, na Doppler na dechara. Ị ga-enwe a ndepụta nke furu efu faịlụ na na mbanye na ọnọdụ nke ndị faịlụ. I nwekwara ike ihuchalu ndị a faịlụ n'ihu gị naghachi ha ka ha ego ha ọnọdụ. Ugbu a dị nnọọ jide n'aka na ị nne Mmetụta faịlụ na ị chọrọ naghachi. Ugbu a pịa naghachi-amalite mgbake usoro.
Mgbe usoro, faịlụ ga-abụ dị na ndabere ọnọdụ nke naghachi. Gaa na-emeghe ha na-enwe, gị furu efu faịlụ na-gbakee. Ihe ndị mmadụ kwesịrị na-elekọta mgbe eji NTFS.In iji na-NTFS na kasị mma ọnọdụ maka ogologo oge, ọ na-achọ ụfọdụ precautionary nzọụkwụ gị n'akụkụ.
Machibido onwe gị site na iji mbughari media. Ọ bụ ihe kasị ewu ewu ụzọ na-ebibi gị NTFS draịva. Na-USB draịva pụọ ​​iji na-echebe software ma ọ bụ nanị anụ ahụ wepụ ha.
Na-na kọmputa gị n'okpuru akara. Ị ga-ahụ otú i jikọọ LAN iji jide n'aka na ị na-agaghị ịghọgbu na diski ike.
Dowe Firewalls elu. Ọ bụrụ na o kwere omume, ịzụta a dị ike antivirus na firewall na-ya emelitere na-na kọmputa gị mma si mgbe egwu.
Oké ụzọ ịzọpụta gị data. Ị pụrụ ọbụna ndabere gị data na ígwé ojii. On a mgbe niile, iṅomi ike mbanye ma ọ bụ usoro ya na-edebe ya na kacha arụmọrụ larịị.
> Resource> Draịvụ> Olee naghachi furu efu data si NTFS Draịvụ?